Septambra 18, 2018 Admin
Coinbase dia mampahafantatra ny LinkedIn mpanatanteraka toy ny Chief Data vaovao
Cryptocurrency Exchange Startup Coinbase efa nanamby LinkedIn Lohan'ny Analytics sy Data Science.
Michael Li, ny ambony LinkedIn mpitantana izay nandany mihoatra ny fito taona amin'ny sehatra tambajotra matihanina, dia mihevitra ny andraikitry ny filoha lefitra ny Data, araka ny lahatsoratra iray navoakan'ny bilaogy talata.
Ny asa hatreto nifantoka tamin'ny fampidirana ny tahirin-kevitra ara-bola ho tolotra, e-varotra sy ny tambajotra sosialy, efa nosoratany teo lahatsoratra. Izy dia mino fa misy “mety tsy misy farany” ny fampiasana ny angon-drakitra ao cryptocurrency sy ny blockchain toerana.
“Faly aho momba ny fahaizana mamaritra sy nivoatra ny anjara toeran'ny angon-drakitra fa afaka milalao ao amin'ny toerana nivoatra haingana, fanakambanana vaovao mieritreritra ny hamahana olana vaovao amin'ny lesona nianarako avy ny taloha,” hoy izy.
“Data dia ho manan-danja mba hanatanjahana Coinbase ny asa nanirahana sy ny tetikady amin'ny nanolotra ny tena itokisana sy mora-to-fampiasana cryptocurrency vokatra sy ny tolotra. Mahatsapa tombontsoa handray izany sarotra sy mahafa-po ny anjara asany vaovao manomboka amin'ny toko manaraka ny asa. »
Noho izany toe-tsaina farany, Coinbase manohy ny taona hampidonana mba hanitarana ny ekipa mpitarika. Tao anatin'ny folo volana, Exchange efa nanamby ny filoha lefitra ny vola, Fifandraisana sy ny Engineering, ary koa ny fitantanam-bola sy ny fanajana ambony manamboninahitra.
Manokana, Li Tsy vao voalohany LinkedIn mpitantana mba hanatevin-daharana ny Coinbase andian. Tamin'ny volana Martsa, Coinbase Emilie Choi dia nanambara fa efa miray fiara ny fahazoana.
Vao haingana indrindra, dia nanambara ny orinasa dia mety nanakarama mihoatra noho ny 100 mpiasa vaovao vao haingana noho ny birao nisokatra tao New York ny taona manaraka.
$123M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao
altcoin AltCoin Buzz altcoin isan'andro altcoins bitcoin bitcoin fanadihadiana Bitcoin fianjerana bitcoin fianjerana over bitcoin vaovao bitcoin vaovao amin'izao fotoana izao bitcoin prediction Bitcoin vidiny bitcoin Price fitomboana Price bitcoin vaovao bitcoin fanadihadiana ara-teknika bitcoin amin'izao fotoana izao andian-tsoratra rojo BTC btc vaovao btc amin'izao fotoana izao cardano crypto cryptocurrency cryptocurrency tsena cryptocurrency vaovao cryptocurrency varotra crypto vaovao fitongilànana eos ethereum ethereum fanadihadiana ethereum vaovao ethereum Price how to make money vola investing bitcoin investing crypto dia bitcoin nanao doza litecoin Neo vaovao ripple Tron rehefa hividy bitcoin xrp